IKLABU YECACTUS / Iquartz - I-Airbnb
IKLABU YECACTUS / Iquartz
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDiana Y Francisco
UDiana Y Francisco yi-Superhost
I-Avant-garde, ephakathi kunye neyamkelekileyo, ezi zezinye zeempawu zayo, ineendawo ezikhululekile eziya kukuvumela ukuba ujabulele ukuhlala okuhle kakhulu. Ilungiselelwe ngokukhethekileyo iindwendwe ezifuna imfuno ezineziqendu ezitsha ezibalaseleyo nezixhotyiswe kakuhle. Ine-wifi, iNetflix, igadi yophahla enejacuzzi, isitulo sokuhlala, igumbi lokutyela langaphandle kunye negumbi lokuhlambela impahla. Kananjalo inendawo ezimeleyo ye-snack bar apho unokonwabela amashwamshwam ngenkonzo yegumbi kunye nophahla.
I-Apartment ixhotyiswe nge-wifi, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, i-32 "isikrini esine-netfix, idesika, ifenisha yesilingi, uqhagamshelwano lwe-USB, igumbi lokuhlambela elinamanzi ashushu, ishampu kunye neetawuli. Kwakhona, ikhitshi lixhotyiswe nge-induction grill, umenzi wekofu, i-blender, izitya ezahlukeneyo zokupheka. ., microwave eziko, ifriji, okudlela igumbi, iindawo ezifanayo exhotyiswe ijacuzzi, itheyibhile emyezweni iambrela, bar inkonzo kunye igumbi lokuhlamba, yokupaka.
Yimizuzu emi-5 nje ngemoto okanye imizuzu eli-15 uhamba usuka kwiiphiramidi ezintle zaseTeotihuacan. Ukongeza, indawo yayo enqabileyo iya kukuvumela ukuba ukonwabele ukuhamba kumbindi wedolophu yomlingo yaseSan Juan, apho unokungcamla ukutya okwahlukeneyo kwaseMexico kwimarike yengingqi edumileyo kwaye ufunde kancinci malunga nendlela yokuphila yabemi. Ifumaneka entliziyweni yeSan Juan Teotihuacan, imizuzu emi-2 ukusuka kwi-cathedral, ikwangqongwe ziivenkile zokutyela, imivalo, iivenkile eziluncedo, iibhanki, izithuthi eziya kwezinye iidolophu nakwiCdmx. Ungahamba ngokulula kwaye ujabulele amava angaqhelekanga.
Umbuki zindwendwe ngu- Diana Y Francisco
Isibophelelo sethu kukubonelela ngenkonzo elungileyo ukusuka kumzuzu wobhukisho kude kube sekupheleni kwamava akho eTeotihuacan.
Ukusombulula amathandabuzo, uqhelaniso kwiindawo ezinomdla, iingcebiso kunye neengcebiso zokhenketho kunye neminye imisebenzi kunye nenkonzo yothutho kwisikhululo seenqwelomoya.
Ukusombulula amathandabuzo, uqhelaniso kwiinda…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Juan Teotihuacan de Arista